भूत उतारिदिन्छु भन्दै एक लाख र औठिपनि लिए, सबै कपडा उतारेर त्यसपछि… ! – Classic Khabar
उदयपुरमा सबै हैरान हुने एक घटना बाहिर आएको छ । झारफुक गरी रोग निको पारिदने भन्दै गलत काम गरेको आरोपमा मंगलबार गाईघाटबाट दुई जनालाई समातिएका छन् । त्यहाँ आफूलाई धामी बताउने स्थानीय ३९ वर्षीय अर्जुन भन्ने चुडामणि श्रेष्ठ र आफूलाई माता बताउने ४५ वर्षीया जुना राई पक्राउ परेका हुन् ।
Prevयस्तो पनि हुन्छ ? बिहेको भोजमा मासु नदिएको भन्दै घनघोर लडाईँ, १ जनाको मृत्यु, ३ जना गम्भीर घाईते
Nextसाबधान यस्तो कहालीलाग्दो छ टेकु अस्पतालमा बिरामीको हालत